တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၊ စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်သိမ်းယူခြင်း (၂၀၁၀) - သင်၏ ဦး နှောက်သည်порно
တိရစ္ဆာန်များ၏စာရေး masturbate, ဒါပေမယ့်လူ့ယောက်ျားများ၏ပြင်းထန်မှုနှင့်သုတ်ရည်လွှတ်အကြိမ်ရေနှင့်အတူအဘယ်သူအားမျှ-လာသောအခါသိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသော မှလွဲ. (အဆိုအရ Leonard Shlain, MD).
လက်ရှိသီအိုရီအရကျွန်ုပ်တို့လူသားများသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းဖြစ်သည်၊ ဆက်နွယ်သောယူဆချက်တစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့၏လူသားဆန်သောတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့လူသားဖြစ်ခဲ့သမျှကာလပတ်လုံးဆက်လက်တည်ရှိသည်ဟုဆိုသည်-ယာယီထိုကဲ့သို့သောဘာသာရေးသို့မဟုတ်လူမှုရေးအခက်အခဲအဖြစ်သဘာဝတပ်ဖွဲ့များကနှိမ်နင်းသည့်အခါ မှလွဲ. ။ အဲဒီနှစျခုယူဆချက်ကနေတတိယအောက်ပါအတိုင်း: သည်ဟုစိတ်ကူးယဉ်ဖို့သဘာဝကျန်းမာတွဲဖက်ဖြစ်ပါသည်, သို့မဟုတ်ပင် sine qua မဟုတ်တဲ့ တစ်ဦးပြည့်စုံလိင်ဘဝ၏။
ဆက်ဆက်စိတ်ကူးယဉ်လိင်ကစားစရာများနှင့်ညစ်ညမ်းပြုကြသကဲ့သို့, မကြာခဏအော်ဂဇင်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ သို့သျောလညျးကြှနျတျောတို့ fantasize မှစွမ်းရည် (ရသော may, ဒါမှမဟုတ်မ လူသားထူးခြားတဲ့မကျမည်အကြောင်း) အပြည့်အဝကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့်စိတ်ကူးယဉ်မာရသွန်အဘို့အကောင့်?
ငါမကြာသေးမီကအတွေ့အကြုံအများကြီး masturbating နှင့်စိတ်ကူးယဉ်နှင့်အတူအချို့သောစဉ်းစားဟန်ယောက်ျားအကြားဆိုက်ဘာဖလှယ်မှုခိုးနားထောင်ခြင်း။ သူတို့တင်ပြတဲ့အချက်တွေကြောင့်ကျွန်တော့်ရဲ့မှတ်ချက်တွေကိုအောက်မှာမျှဝေပေးပါလိမ့်မယ်။
အမှန်မှာ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အတိတ်ကာလကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်လူမည်မျှရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိနိုင်ပါ၊ ဒီနေ့ခေတ်ကျွမ်းကျင်သူများသည်“ သဘာဝအခြေအနေများ” အတွက်ခေတ်သစ်အခြေအနေများကိုမှားယွင်းစေသည်။ လူများ (အထူးသဖြင့်အမျိုးသားများ) သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများကိုမြင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကြီးပြင်းလာသည့်လူမှုရေးအဆောက်အအုံပြင်ပမှရှင်းလင်းချက်များကိုရှာဖွေကြသည်။ ဤဖွဲ့စည်းပုံကိုဓမ္မဓိively္ဌာန်ကျကျဆန်းစစ်ရန်၎င်းတို့သည်အသက်ရှင်နေထိုင်လိုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သူတို့၏ယုံကြည်ချက်အချို့ကိုဖယ်ထားရန်လိုသည်။ 24/7 porn စကြာ ၀ universeာမှာ။ သူတို့သည်ရေတွင်ရေကူးကြသည်ကိုမည်သည့်အခါမျှသံသယမဖြစ်သည့် fishblow ရှိငါးများကဲ့သို့ပင်ညစ်ညမ်းသည်“ တိုးတက်သော” နှင့်စသည်ဖြင့်သူတို့၏ယူဆချက်ကိုသံသယမရှိကြပါ။ သူတို့ကအကန့်အသတ်မဲ့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများ (အစဉ်အမြဲဆိုးရွားသည်ဟုရှုမြင်ခဲ့ကြသောရှေးဟောင်းဥယျာဉ်များ၏ဆန့်ကျင်ဘက်) ၏အတွေးအမြင်ဆိုင်ရာယုံကြည်မှုများအပေါ် အခြေခံ၍ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြသည်။
တချို့ကသုတေသီများသည်အခြားမျောက်ဝံများအကြားနိုင်အောင်နည်းနည်းတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကိုရှာဖွေအံ့အားသင့်ခဲ့ကြပြီ။ တဦးတည်းထိုကဲ့သို့သောတိရိစ္ဆာန်သုတေသီ Gilbert ကဗန်ပနျးပှားကိုတို့ Hamilton ကဆိုပါတယ်,
ငါ့အလိုရှိသမျှအထီးမျောက်သာ Jocko ၏ masturbate မှလေ့လာတွေ့ရှိထားသည်။ ရက်အနည်းငယ်ခံထားပြီးနောက်သူသည်မိမိအသုတ်ရည်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု masturbate စားလိမ့်မယ်။ ငါသူ့ကိုဝယ်ယူမတိုင်မီသူနှစ်ပေါင်းများစွာသဘာဝအခြေအနေများအောက်တွင်နေထိုင်ခဲ့ကြောင်းယုံကြည်ဖို့အကြောင်းပြချက်ရှိသည်။
ဘယ်လိုသတိထားမိ ကုန့်သတ်ခြင်း Jocko ရဲ့အမူအကျင့်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ ယနေ့ကျွန်တော်သည်“ သဘာဝမဟုတ်သောအခြေအနေများ” အောက်တွင်နေထိုင်နေရသည်ဟုကျွန်ုပ်တင်သွင်းသည် သူတို့သည်ဤ“ သဘာဝစိတ်ကူးစိတ်သန်း” အားလုံးကိုပံ့ပိုးပေးနိုင်ပြီးလူ ဦး ရေ၏ကိုးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကသူတို့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုဝန်ခံနိုင်မည်လော။ လူတိုင်းက“ ယောက်ျားလေးများသည်ယောက်ျားများဖြစ်လိမ့်မည်” ဟုခေါင်းတညိတ်ညိတ်နှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်“ သဘာဝ” ဖြစ်သည်နှင့်အမျှပန်းသီးပိုင်ကဲ့သို့သောကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ဓာတ်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏မုန်းတီးမှုအပေါ်သြဇာသက်ရောက်စေသည်။
အလွန်စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းသောအခြေအနေများတွင်နေထိုင်သောသုံ့ပန်းမျောက်ဝံများကဲ့သို့သောအလွန်အလုပ်လက်မဲ့များ၊ အခြေခံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမရှိခြင်း၊ လူနေမှုအဆင့်အတန်းကိုတိုက်ခိုက်ခြင်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးယိုယွင်းခြင်းနှင့်စစ်ကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြသည့်စိတ်ဖိစီးမှုများသော ၀ ါဒဖြန့်ချိခြင်း၊ စီးပွားရေးအသားအရောင်ခွဲခြားမှု၊ အမျိုးသမီးများ၏အထွေထွေယုတ်ညံ့မှုနှင့်ကလေးသူငယ်များအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြတ်ထုတ်မှုစသည့်လူမျိုးရေးခွဲခြားသည့်စနစ်တစ်ခု ... ကျွန်ုပ်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်ပါသလား။ လူတိုင်းသည်တစ်စုံတစ်ရာကိုစွဲလမ်းနေသည်မှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။
ငါတို့အားလုံးသည်ဤ "သုံ့ပန်းမျောက်များ" ကဲ့သို့အချို့သောနည်းလမ်းများဖြင့်ရောက်ရှိနေပြီး၎င်းသည်အမေရိက၏gigရာမအကျဉ်းထောင်စနစ်တွင်သုံ့ပန်းဖြစ်နေသောလူပေါင်း ၂.၅ သန်းကိုပင်ဖယ်ထုတ်ပစ်နိုင်သည်။ ဤ“ သဘာဝအခြေအနေများ” သည်လုံးဝသံသယရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ သို့သော်ဤနှင့်အခြားအချက်များကိုအထူးသဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းသည်၎င်းတို့အတွက်ပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံသူများ၏ဆွေးနွေးမှုအတွက်အထူးသင့်လျော်သည်။
ကျွန်တော့်အိမ်ထောင်ရေးကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်ပျက်စီးစေခဲ့တဲ့ငါ့ရဲ့တစ်ကိုယ်ရည်ရာဂစိတ်ဖြေတဲ့စိတ်ကူးယဉ်လေ့ကျင့်မှုဟာအလွန်အမင်းဆုံးချိန်မှာဖြစ်ခဲ့တယ်။ တကယ်တော့ (ငါ့ရှေ့မှာငါ့ကိုယ်ပိုင်အဝတ်အချည်းစည်းဇနီးအပါအဝင်) သဘောတူညီမှုအဖြစ်မှန်နှင့်အတူထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ငါ့အစွမ်းရည်ကိုချို့ယွင်း။ လိင်ဆက်ဆံနေစဉ်အတွင်းသူမလိုချင်သောအရာများကိုအတိအကျလုပ်နေသည်ကိုသူမြင်ယောင်ကြည့်နိုင်သည်။ အဖြစ်မှန်နှင့်လုံး ၀ မဆက်စပ်မိစေရန်တားဆီးသောစိတ်ကူးယဉ်၏တစ်ခုတည်းသောအချက်မှာသူမ၏ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်သည်။ လိင်စိတ်ကူးစိတ်သန်းသည်လိင်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်ဟူသောအမြင်ကိုလုံးဝဆန့်ကျင်။ လိင်မှစိတ်ကူးစိတ်သန်းကိုဖယ်ထုတ်ပြီးမှသာကျွန်ုပ်၏ဇနီးကိုသူမလိုချင်ခဲ့သည်။ မကောင်းမှုကြီးတဲ့ရှေးခေတ်ကသူမတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေရာမှာအကူအညီတောင်းတဲ့အခါသူမက“ မင်းဘာတွေစဉ်းစားနေတာလဲ” ဟုမကြာခဏမေးလေ့ရှိသည်။ ထိုအခါငါ "အိုးတကယ်ဘာမျှမ။ " မုသာစကားကိုလိမ့်မယ်
လွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်အတွင်းကျွန်ုပ်၏လိင်စိတ်ကူးယဉ်မှုများကိုမဆုတ်မနစ်ဖယ်ရှားပစ်လိုက်သည်နှင့်အမျှကြီးမားသောပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ ငါအလွန်ထိမိခြင်းဖြင့်နှိုးဆော်ရ။ ကျွန်တော့်ဇနီးကလိင်မှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်ုပ်ဘယ်လိုထင်သလဲလို့မေးနေတုန်းပဲ၊ ဒါပေမယ့်အခုငါမစဉ်းစားဘူးလို့တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့အခါမှန်တယ်လို့ပဲငါပြောတယ်။ ကျွန်ုပ်၏စိတ်ထဲမှစိတ်ကူးစိတ်သန်းများကိုမပျောက်ကွယ်စေရန်ကျွန်ုပ်၏စွမ်းရည်ကိုတိုးမြှင့်လိုက်သည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်၏အိမ်ထောင်ရေးသည်ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာသည်။ အကယ်၍ စိတ်ထဲတွင်လှုပ်ရှားမှုအားအမြင့်ဆုံးတရားဝင်မှုပေးသည်ဆိုလျှင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံသဏ္conformာန်နှင့်အညီကိုက်ညီလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ရလဒ်မှာလူတစ် ဦး ၏အခြေအနေကိုအခြေခံကျကျမကျေနပ်မှုဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လိင်အလေ့အကျင့်များအတိုင်းသွားသည်နှင့်အမျှခေတ်သစ်လူ့အပြုအမူသည်တစ်ခုတည်းသောဖြစ်နိုင်ချေရှိသောလူ့အပြုအမူပုံစံဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးနီးပါးသည်များသောအားဖြင့်မိမိဆန္ဒအလျောက်ဖမ်းဆီးခြင်းခံနေရသော်လည်းမည်သို့ပင်ဆိုစေ၊ ညမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပိတ်ထားတယ် နေ့အချိန်၌ကျွန်ုပ်တို့အတွင်း၌သော့ခတ်ထားခြင်းမရှိသော်လည်းတံခါးများသည်သော့ခတ်စရာတောင်မလိုအပ်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်တို့သည်စိတ်လှုပ်ရှားမှုမှလွတ်မြောက်သည်အထိအလုပ်တွင်ချုပ်နှောင်ထားခံထားရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အလုပ်ပြီးနောက်၊ ကျွန်ုပ်တို့ကြိုက်သလောက်လုပ်နိုင်သည် (နည်းနည်းအချိန်နည်းနည်း) လုပ်နိုင်သည်၊ သို့သော်လူအများစုအတွက်ရုပ်မြင်သံကြား၊ အစာစားခြင်း၊ ဖြီးလိမ်းခြင်း၊ မိသားစုအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ခြင်း၊ အီလက်ထရောနစ်မဟုတ်သော escapism (အနုပညာ၊ အရက်ဆိုင်) ကြွက်ဘီးလေ့ကျင့်ခန်း၊ ချိတ်ဆက်ရန်ကြိုးပမ်းခြင်း၊ အီလက်ထရောနစ် escapism နှင့်လိင်။ ထို့အပြင်လွတ်လပ်မှုကိုစူးစမ်းလေ့လာရန်အချိန် ၈ နာရီသာရှိသည်။ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်စကားပြောတာ၊ ပျော်တာ၊ ပြီးတော့အိပ်ရေး ၀ တ္ထုကိုပြန်ကစားရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီ
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းခြောက်ကြိမ်လောက်ကျွန်ုပ်သည်သံသရာပြင်ပတွင်တစ်ပတ်လျှင်နှစ်ပတ်မျှနေထိုင်ရန်ဇိမ်ခံကားကိုခံစားခဲ့ရသည်။ ငါသိသလောက်ပြောရလျှင်၊ ဤသို့သောလှုပ်ရှားမှုမျိုးသည်သမိုင်းမတင်မီပုံစံများနှင့်ကိုက်ညီလိမ့်မည်။ ကိုယ်ပိုင်သတ်မှတ်ထားသောအချိန်ဇယားများ၊ မိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်နေထိုင်သောနီးကပ်သောရပ်ကွက်များ၊ အတော်လေးခက်ခဲတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်သားတွေလည်းပါ ၀ င်တယ်။ ကျွန်ုပ်၏မကြာခဏလိင်အကျင့်များပျောက်ကွယ်လုနီးပါးဖြစ် တစ်ပတ်ကိုအော်ဂဇင် ၄ ခုအစားငါ ၂ ပတ်အတွင်းအော်ဂဇင် ၀ မှ ၂ ခုရှိခဲ့ပြီး၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ကိုမသုံးခဲ့ပါ။
သိသာထင်ရှားသည်မှာ 'လေ့လာမှုများထပ်မံလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်ပြီး' ကျွန်ုပ်၏ 'နမူနာအရွယ်အစားသည်အလွန်သေးငယ်လွန်းလှသည်။ မှန်သော်လည်းနိဂုံးချုပ်အဖြေရှာရန်မလွယ်ကူပါ။ သို့သော်တူညီသောအချက်မှာကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏လွတ်လပ်ခွင့်ကိုတိုးမြှင့်မည့်နည်းဗျူဟာကိုရှာဖွေနေခြင်းဖြစ်သည်။
သင်တန်း၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းဟာအံ့ဘွယ်သောပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့အားလုံး tools များကဲ့သို့, ကောငျးကြိုးအတှကျသို့မဟုတ်မကောင်းတဲ့အတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ညစ်ညမ်းအပေါ်အခြေခံပြီးစိတ်ကူးယဉ်ကြောင့်ရေရှည်မှာအောက်မှာကျွန်တော်တို့ကိုထည့်လေ့မရှိစိတ်ဖိစီးမှု၏, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိညာဉ်ရေးရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိုဆိုးရွားပါတယ်။ အဆိုပါချက်များမရရှိစွဲလမ်းပဲ, ဆွန်းစိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်ချည်းဖြစ်ပါတယ်။
လူသားတွေရဲ့သမိုင်းအလေ့အထကိုသောမတ်စ်ဒဗလျူ တိုက်ပိတ်လိင်: တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေတဲ့ယဉ်ကျေးမှုသမိုင်း။ ၁၈ ရာစုမှလေ့လာသူများသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအပါအ ၀ င်မတော်မတရားပြုခြင်းကို“ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာရောဂါများ” ဟုရည်ညွှန်းကြောင်းထိုတွင်ကျွန်ုပ်သိရှိခဲ့ရသည်။ ဥရောပသားများသည်တိုးချဲ့ထားသောမိသားစုများထံမှပုံမှန်မဟုတ်သောချုပ်နှောင်ထားမှုနှင့်အထီးကျန်မှုရှိသည့်မြို့ကြီးများသို့ပြောင်းရွှေ့သည့်အချိန်အထိသူတို့သည်အဆန်းမဟုတ်ချေ။
သမိုင်းတွင်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အားသစ်နှင့်စိတ်ကြွဆေးများ (နှင့်လှုံ့ဆော်မှုများ) ကိုလည်းကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရရှိနိုင်သည် - ဆေးရွက်ကြီး၊ ချောကလက်၊ ရမ်၊ လောင်းကစား၊ စျေးဝယ်ခြင်း၊ ဘဏ္specာရေးထင်မြင်ချက်များ၊ အပြာစာပေနှင့်အသည်းအသန်အချစ်ဇာတ်လမ်း။ ယခုအခါ“ စွဲလမ်းမှု” ဟူသောစကားလုံးသည်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ နှင့်တွန်းအားပေးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းဆွဲဆောင်မှုကိုရရှိခဲ့သည်။
သိသာထင်ရှားသောတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်အသစ်သောအတွေးအခေါ်မဟုတ်ပါ၊ ၁၈ ရာစုမတိုင်မှီတွင်လိင်ခွဲခြားထားသည့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များမှအပမိမိကိုယ်ကိုပျော်ရွှင်မှုနည်းစေသည့်အပြုအမူမျိုးကိုဘယ်သူမှမမြင်နိုင်ပါ။ ယခုတွင်မူလူတို့သည်လူများသည်၎င်းတို့အားအစေခံခြင်းမပြုခဲ့သောအပြုအမူအမျိုးမျိုးနှင့်ချိတ်ဆက်လာကြသည်။ ယင်းတို့ကိုကျော်လွှားရန်မလွယ်ကူသောကြောင့်ထိုသို့သောအတင်းအဓမ္မများသည်ကျွမ်းတဝင်မရှိသော၊
၁၈ ရာစုမှလေ့လာသူများကလူတစ် ဦး နှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုနှင့်လူတစ် ဦး ၏စိတ်ကူးနှင့်လိင်ကွဲပြားမှုကိုညွှန်ပြခဲ့သည်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး ၏ပါ ၀ င်မှုသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုလက်တွဲဖော်ရရှိနိုင်မှု၊ မိသားစုတောင်းဆိုမှုများ၊ ဘဏ္financialာရေးအခက်အခဲများသို့မဟုတ်ကြိုးပမ်းမှုစီစဉ်ခြင်း၏ ၀ န်ဆောင်မှုပုံစံများကိုသဘာဝကျကျထိန်းချုပ်ထားသည်။ Do-it-yourself လိင်သည်အခြားတစ်ဖက်တွင်ကန့်သတ်ချက်မရှိဘဲပိုမိုလွယ်ကူစွာဖြစ်လာနိုင်သည် တောင်းဆိုအလေ့အထ။ “ သဘာဝလိုအပ်ချက်များ” (နှင့်အပြန်အလှန်သဘောတူညီမှု) အပေါ် အခြေခံ၍ လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်စိတ်ကူးယဉ်သို့မဟုတ်အခြားမိမိကိုယ်ကိုနှိုးဆွခြင်းဖြင့်ထုတ်လုပ်သောအော်ဂဇင်ထက်ပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းမည်ဟုယူဆကြသည်။ (စကားမစပ်, စိတ်ပညာရှင် Stuart Brody ၏လုပျငနျးကြောင်းအတည်ပြုပုံရသည် လိင်ဆက်ဆံမှုကိုပိုမိုပြော့ဖြစ်ပါသည် နှင့်တစ်ကိုယ်တော်လိင်ထက်အကျိုးရှိသော။ )
အလွန်အကျွံတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းမရှိနည်းလမ်းဖြင့်ရောက်သောသစ်ကိုအဆင့်ဆင့်ဖြစ်စေတဲ့တစ်ခုတည်းသောအလေ့အထ-ဖွဲ့စည်းဖြားယောင်းခဲ့ပေမယ့်ကလေးများသို့ထိ မိ. လဲရန်အဘို့အအလွယ်ကူဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ မရအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်, အလွန်အကျွံတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်မှုပထမဦးဆုံးဘော်ဒါကျောင်းများအတွက်ကလေးတွေမှကိစ်စတှငျထုတ်ပြန်ထားတဲ့ခဲ့ကြသည်။ ဤရွေ့ကားကလေးများကြောင့်ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်၏မိသားစုများနှင့်ရွယ်တူတွေနဲ့အဆက်အသွယ်၏သဘာဝခံထားနှင့်ဆင်းရဲချို့တဲ့ဖို့ပြီးသားစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းမရှိသံသယဖြစ်ကြသည်။
သို့သျောလညျးတစ်ခု၏အန္တရာယ်ကိုရှင်းပြဖို့ဘယ်လို ကလေးတွေမှအလေ့အထမြင့်တက်? ဦး နှောက်ကိုစွဲလမ်းစေသည့်သိပ္ပံပညာဆိုင်ရာအယူအဆမရှိခဲ့ပါ။ “ ညစ်ညမ်းမှုကိုရှောင်ကြဉ်ရန်” ကလေးများကိုတိုက်တွန်းခဲ့သည်။ ဝမ်းနည်းစရာမှာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမှတစ်ဆင့်လိင်မှုကိစ္စမှကယ်ဆယ်ရေးရှာဖွေမှုကိုကြည့်ရှုရန်မျိုးဆက်သစ်များကိုကြီးပြင်းလာခဲ့သည် ကိုယ်ကျင့်တရား ပျက်ကွက်ထက်သာမန်အကွံ (အထူးသဖြင့်ပေးထားသောကသူတို့စိတ်ဖိစီးမှုခွအေနမြေား) အဖြစ်, အရာ တန်ရာအမြော်အမြင်စီမံခန့်ခွဲမှု.
ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၏မှားယွင်းမှုသည်မှားသည်; အရှက်ကွဲခြင်းကိုဖျက်ဆီးသည်။ သို့သော်ဤသမိုင်းဝင်ချဉ်းကပ်နည်းနှင့်ယနေ့တန်ပြန်မှုများသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်အေးအေးဆေးဆေးမေးမြန်းခြင်းကိုစိတ်ရှုပ်ထွေးစေသည်။ ၎င်းကကျွန်ုပ်တို့သည်ကျန်းမာရေးနှင့်မညီညွတ်သောလိင်ဆိုင်ရာဖိနှိပ်မှုခံရမည်ကိုစိုးရိမ်ခြင်းမရှိဘဲကျန်းမာရေးဟန်ချက်ညီစေနိုင်သည်။
တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏ယဉ်ကျေးမှုသမိုင်းပေးထားပါကလူသားမြားသညျကြောင်းဖွယ်ရှိပုံရသည် မ ယေဘုယျအားဖြင့်ခံစားချက်-ပြောင်းလဲကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများအတွက်မကြာခဏအထွတ်အထိပ်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ပေါ်အားကိုး-သူတို့ထစ်အငေါ့အခြေအနေ၌မိမိတို့ကိုယ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်အထိ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်သည်ကောင်းစွာကိုင်တွယ်ရန်မဖွံ့ဖြိုးသေးသောစိတ်ဖိစီးမှုများသည့်အခြေအနေတွင်ယနေ့ခေတ်တွင်အော်ဂဇင်ကိုမရပ်မနားလိုက်စားခြင်းကမိမိကိုယ်ကိုဆေးဝါးကုသရန်ကြိုးပမ်းမှုဖြစ်နိုင်သလား။ တစ်ခု ကနေဒါစွဲကျွမ်းကျင်သူ ရှင်သန်နိုင်သောယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုမပေါ်ပေါက်မှီတိုင်အောင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စွဲလမ်းမှုပြtouchနာကိုမည်သည့်အခါကမျှကိုင်တွယ်လိမ့်မည်ဟုမထင်ပါ။
Neurohistorian ဒံယလေသညျထာဝရဘုရား၏ Smail တဦးတည်းဈေးဝယ် network ပေါ်ကိုတက်လာတဲ့အပါအဝင်နှင့်ဗလာကယ်လိုရီအပေါ် gorging, ခံစားချက်-ALTER (စိတ်ကို) တ္ထုများနှင့်လှုပ်ရှားမှုများပိုမိုသုံးစွဲခြင်းဆီသို့တစ်ဦးအရှိန်မြှင့်လမ်းကြောင်းသစ်အဖြစ်ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုလုံးကိုသမိုင်းရှုမြင်နိုင်သည်ကိုထုတ်ထောက်ပြသည်။ မကြာခဏ, လိင်-အကူအညီ-တိုးမြှင့်အော်ဂဇင်လိုက်ရှာသော်လည်းအများအပြား၏တဦးတည်း-တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ဆွဲဆောင်မှုတဦးတည်းသော်လည်း။
မိမိကိုယ်ကိုဆေးကုပေးလိုသည့်စိတ်နှင့်ယနေ့အခြေအနေများ၏စိတ်ဖိစီးမှုများကိုကျေနပ်ရောင့်ရဲစေမည့်အစားအရှိန်မြှင့်ပုံရသည်။ သို့ဆိုလျှင်စိတ်ငြိမ်သက်မှုသည် ပို၍ အစွမ်းထက်သောလှုံ့ဆော်မှုများကိုအထွတ်အထိပ်သို့ရောက်သည်ဟုယူဆခြင်းသည်ပညာရှိရာရောက်သလော။ မကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သောသုတေသနများအရဤသင်တန်းသည်အချည်းနှီးဖြစ်နိုင်သည်။ အလွန်အမင်းလှုံ့ဆော်မှုများသည်သူတို့၏စွမ်းအားကြောင့်ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုကိုပိုမိုရရှိနိုင်စေသည် ဦး နှောက်၏ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောတုံ့ပြန်မှုကိုထုံခြင်း.
neurochemical (ထို့ကြောင့်စိတ်ခံစားမှု) အတွက်ခုတ်မောင်းဖို့သင်ယူခြင်းအတွက် သာ. ကြီးမြတ်ရောငျ့ရဲမုသားငှါ ချိန်ခွင်လျှာ-ပင်ခက်ခဲခေတ်သစ်အခြေအနေအောက်မှာ? ကျနော်တို့သောအခါကြှနျုပျတို့ချိန်ခွင်လျှာအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ရန်ပြောင်းလဲထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်၏အခြေခံလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့နည်းလမ်းတွေရှာတဲ့အခါမှာ Self-စေရန်ဆေးအဆိုပါချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့လျော့နည်းအရေးတကြီးဖြစ်ပေါ်လာသော မဟုတ်ကြဘူး သိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသော၌တည်၏။ ဥပမာအားဖြင့်, သုတေသနကွောငျးဖျောပွသ လေ့ကျင့်, ဖော်ရွေအပြန်အလှန်, တို့, pair တစုံခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်နှင့်နေ့စဉ် သေချာစွာစဉ်းစားခြင်း ခံစားချက်အားပြိုင်မှုများနှင့်ဆန့်ကျင်စိတ်ဖိစီးမှုအစီအမံအဖြစ်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ထိရောက်သောဖြစ်ကြသည်။ အဘို့နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်အကြောင်းကိုရှေးဟောင်းနည်းစနစ် သတိထားစီမံခန့်ခွဲမှု လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒအလိုလို?
THREAD ON REDDIT -“ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်သုံ့ပန်းဘဝနဲ့ဘယ်လိုဆက်စပ်သလဲသိလား။ ”
တိရိစ္ဆာန်များသည်သဘာဝအရတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အကျင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကြားဖူးကြသည်။ ဒါဟာစုစုပေါင်းအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်၊ ငါ 'captivity' အကျိုးသက်ရောက်မှုက NoFap ကိုသဘာဝအလျောက်ထက်အဆအဆပိုများစေတယ်လို့ငါထင်တယ်။
ကျွန်ုပ်သည် NoFap တွင်ထူးခြားသောကာလနှစ်ခုရှိခဲ့သည် - ကျွန်ုပ်သည်ကျောင်းမစခင် (ကျွန်ုပ်သည်အထက်တန်းကျောင်းအကြီးတန်းအကြီးတန်းအဆင့်) နှင့်ပြီးနောက်။ နွေရာသီမှာ ၃၁ ရက်သွားပြီး fap ကိုတကယ့်အမှန်တရားမရှိခဲ့ဘူး။ ၎င်းကိုဖော်ပြရန်ခဲယဉ်းသည်။ ၎င်းကိုမလိုအပ်ဘဲလိုသည်။
သို့သော်ကျောင်းစဖွင့်သောအခါစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ကြီးမားသောလိင်ဆိုင်ရာမကျေနပ်ချက်များသည်လွန်ခဲ့သော ၂ ပတ်အတွင်း ၄ ကြိမ်အထိကျွန်ုပ်ထိတွေ့မိသည်အထိငါ့ကိုဒူးထောက်ခဲ့သည်။ အထက်တန်းကျောင်းပတ်ဝန်းကျင် (အလုပ်ခွင်ပတ် ၀ န်းကျင်သည်အလွန်သဘာဝမကျပါ) သည်မည်မျှသဘာဝကျသည်ကိုတကယ့်ကိုအံ့အားသင့်စရာကောင်းသည်။ ကျွန်ုပ်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောမိန်းကလေးများစွာရှိသည်။ သို့သော်လူ့အဖွဲ့အစည်းကကျွန်ုပ်အားကျွန်ုပ်ဗီဇအတိုင်းပြောသောအရာများကိုကျွန်ုပ်လုံးဝမလုပ်နိုင်ဟုလူ့အဖွဲ့အစည်းကသတ်မှတ်သည်။ ငါ့ကို သဘာဝတရား (မုဆိုးမစုဆောင်းလိုသောသဘာဝကဲ့သို့) ကျွန်ုပ်သည်မိန်းကလေးများကိုသူတို့လိင်ဆက်ဆံချင်သလားဟုမေးနိုင်သည်။ အကယ်၍ သူမငြင်းဆိုပါကကျွန်ုပ်သည်အခက်အခဲမရှိလမ်းလျှောက်ပြီးနောက်တစ်ခါထပ်တွေ့ခြင်းမပြုနိုင်။ ပြောစရာမလိုတော့ဘူးအထက်တန်းကျောင်းဒီလိုအလုပ်မဖြစ်ဘူး သင်အထက်တန်းကျောင်းအဖြစ်အပျက်များကိုသင်အမှန်တကယ်စဉ်းစားသောအခါထူးဆန်း။ နယ်နိမိတ်ထပ်ဆင့်ထွေပြားမှုပေါင်းထည့်ပါ။ (သင်စိတ်ဝင်စားမှုမရှိသောအရာများကိုလေ့လာရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခြင်း (STEM လူပုဂ္ဂိုလ်၊ အင်္ဂလိပ်စာအတန်းများကိုကျွန်ုပ်မည်မျှမကြိုက်သည်ကိုစကားလုံးများဖြင့်မဖော်ပြပါ။ ) လုပ်ရန်လိုသည် စိတ်မကောင်းစရာကောင်းသောစီမံကိန်းများအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲစိတ်မပါသောသူများနှင့်အတူရှိနေခြင်း၊ ပင်ကိုယ်ဗီဇတိုင်းကသင့်အားဆန့်ကျင်ဘက်ပြုရန်ပြောသည့်အခါမိန်းကလေးများအနီးတွင်အေးဆေးတည်ငြိမ်ပြီးထိခိုက်မှုကင်းမဲ့စွာနေရန်လိုအပ်သည်။ ထို့အပြင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုကိုနားလည်ရန်လွယ်ကူသည်။ အားလုံးရည်ရွယ်ချက်နှင့်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ပကတိသိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသောထိုကဲ့သို့သောထူးထူးဆန်းဆန်း, သဘာဝအခြေအနေများရှိလူများအတွက်ထိုကဲ့သို့သောအစွမ်းထက်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းယန္တရားနိုင်ပါတယ်။
ကျောင်း / အလုပ်ခွင်ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုကျွန်ုပ်နွေရာသီတွင်နေထိုင်ခဲ့ပုံနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အချိန်ဇယားအတိုင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်စိတ်ဝင်စားသောအရာများကိုဖတ်ရှုခြင်း၊ သင်ယူရန်လှုံ့ဆော်မှုကိုသင်ယူခြင်း၊ မလိုအပ်သောစီမံကိန်းများနှင့်တင်ဆက်မှုများပြုလုပ်ရန်ဖိအားမပေးခြင်းခံခဲ့ရသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမကျေနပ်မှုများကြောင့်ပျက်စီးခြင်း (သို့) အများပိုင်ကျောင်းစနစ်၏အဓိပ္ပာယ်ကင်းမဲ့မှုများကိုကိုင်တွယ်ခြင်းမပြုရ။ ကျွန်ုပ်သည် (သဘာဝအလျောက်နေထိုင်မှုပုံစံ) (မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်လွယ်ကူမြန်ဆန်သော) ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ အဘယ်အရာကိုခန့်မှန်း? ငါ့တိရစ္ဆာန်ရုံပြပွဲသို့မသွားမချင်းကျွန်ုပ်နှင့်လုံးဝလိင်ဆက်ဆံရန်စိတ်မ ၀ င်စားတော့ပါ။
ဒီအရာအားလုံးကတကယ့်ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာဟာသဘာဝပဲလို့လူသိများတဲ့ယူဆချက်ကိုတကယ်မေးခွန်းထုတ်စေပါတယ်။ ဒါဟာအတွက်အလွန်အလွန်သဘာဝပါပဲ သဘာဝမကျသော အခွအေန။
ဤအရာသည်သိသာထင်ရှားသည့်အမြင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အထက်တန်းကျောင်းသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကထူးဆန်းတဲ့အရာနဲ့တူတယ်။ အထက်တန်းကျောင်းကအရမ်းသဘာဝမကျတဲ့ဝန်းကျင်တစ်ခုလိုငါလည်းခံစားရတယ်။ တစ်နည်းနည်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အများပြည်သူပိုင်ကျောင်းစနစ်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ အကျဉ်းသားများသည်အကျဉ်းသားများကိုအလားတူပုံစံမျိုးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသော်လည်းမည်သို့သောဆိုးကျိုးများပိုမိုဆိုးရွားသည် (Shawshank Redemption ကိုကြည့်ပါ။ ) စာသင်နှစ်အတွင်းကျွန်ုပ်၏လူမှုရေးဆိုင်ရာစွမ်းရည်ကိုအလွန်အဟန့်အတားဖြစ်စေသည်။ ရွယ်တူချင်းတွေပတ်ပတ်လည်မှာ။ ) ငါဟာအမြဲတမ်းစိတ်ဖိစီးမှုတွေ၊ ငါသိသိသာသာပိုပြီးပျင်းရိခြင်းနှင့်လှုံ့ဆော်မှုမရဖြစ်၏။ ကျောင်းသည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုစဉ်ဆက်မပြတ်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့်စိတ်ပူပန်ခြင်းသို့ ၀ င်ရောက်သည်။ အချို့သောသူများသည်စာသင်နှစ်အတွင်းပုံမှန်အားဖြင့်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ ငါမဟုတ်။ သို့သော်နွေရာသီတွင်ကျွန်ုပ်ကိုယ်ခန္တာကိုယ်ကို“ ပြုပြင်” လုနီးပါးဖြစ်နေသည်။ ငါကငါ့ရဲ့ "သဘာဝ" ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနဲ့တူလာတယ်။ ငါနှင့်အတူအဆင်ပြေဖြစ်ကြောင်းကို / ၏ကုမ္ပဏီပျော်မွေ့တော်မူသောအချို့ရွေးချယ်သည်။ ငါဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုပိုရှိသူ၊ စွမ်းအင်ပြည့်ဝတဲ့၊ စန္ဒရားကိုတီးခတ်ရတာ၊ ငါလိုချင်တာကိုပဲဖတ်နိုင်မယ်၊ ငါနင့်လိုခံစားခဲ့ရရင်နောက်ကျမှနေပါ။ ငါ့ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှု၊ မနှစ်သက်မှု၊ အကြှနျုပျ၏အသိဉာဏ်သဘောသဘာဝနွေရာသီကာလအတွင်းထွန်းလင်း။
တစ်နေ့မှာ nofap ကိုကျွန်တော်သိလိုက်ပြီ။ ငါပိုကောင်းတဲ့အစာစားခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း၊ သူငယ်ချင်းသစ်ဖွဲ့ခြင်း၊ မိန်းကလေးများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း၊ တေးဂီတကစားခြင်း၊ အကြိုက်ဆုံးရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်း၊ စစ်မှန်စွာသင်ယူခြင်း (ကျောင်းမှာဖြစ်ပျက်နေသော bullshit သင်ယူခြင်းမဟုတ်)၊ ဘဝ စကားမစပ်၊ မင်းဟာမင်းလိုမင်းအထက်တန်းကျောင်းအကြီးအကဲတစ်ယောက်ပါ၊ ဒါကြောင့်ငါတို့တန်း - ကျောင်းနေအရွယ်ရောက်သူများသည် redditors အရွယ်ရောက်သူတွေလိုပဲထိုးထွင်းသိမြင်မှုရှိနိုင်တာကိုမြင်ရလို့ ၀ မ်းသာပါတယ်။ (သင်သိသော်လည်း, redditors အများစုကိုကျွန်တော်တို့ကိုမုန်း)
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏အံ့ဖွယ် Rethinking - တစ်ကိုယ်တော် sex အကြောင်းငါးပါးလူကြိုက်များဒဏ္ဍာရီပြန်လည်စဉ်းစား